करण जोहरले उनको ट्वीटर अकाउन्टबाट सबैलाई अनफलो गरे भने सोनाक्षी सिंन्हाले अकाउन्ट नै बन्द गर्नु पर्यो ।केही दिन अघि जब सुशान्तको कुकुर उनको फोटो हेरेर रोयो…. भन्दै समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
आज उनको कुकुरको निधन भएको खबर बाहिर आएको छ । भारतीय मिडियाहरुले उनको कुकुर फज्ड (फूग्गी)क को निधन भएको दाबी गरेका छन् भने केहीले हल्ला मात्र भएको बताएका छन् ।उनको निधनलाई लिएर मुम्बईमा रहेको ब्रान्द्रा प्रहरीले १५ जनामाथि अनुसन्धान गरिसकेको छ ।
करण जोहरले उनको ट्वीटर अकाउन्टबाट सबैलाई अनफलो गरे भने सोनाक्षी सिंन्हाले अकाउन्ट नै बन्द गर्नु पर्यो ।केही दिन अघि जब सुशान्तको कुकुर उनको फोटो हेरेर रोयो…. भन्दै समाचार सार्वजनिक भएको थियो । आज उनको कुकुरको निधन भएको खबर बाहिर आएको छ ।भारतीय मिडियाहरुले उनको कुकुर फज्ड (फूग्गी)क को निधन भएको दाबी गरेका छन् भने केहीले हल्ला मात्र भएको बताएका छन् ।